OPDOn Fixeensa Ganamaa ti! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOPDOn Fixeensa Ganamaa ti!
OPDOn Fixeensa Ganamaa ti!
Damee Boruu: Waxabajjii 28, 2019
Grass with dew in the morning of a new day.
Fixeensa keessa gara barii deemuun baayyee nama rakkisa. Keessatuu yaroo qorri bu’u baayyee nama hadoocha. Gaafa aduun itti bahaa deemu immoo achi buuteen isaa ni bada. Hojiin OPDOs akkuma fixeensa ganamaa sana yaroo gabaabaa keessatti kana achi buuteen ishee baduuuf deemu akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Ijaarsi qaama uummataa keessaa dhalatee hundee hin qabanne aangoo qabatee turuu hin danda’u.
Humni siyaasaa kam iyyuu aangoo qabatee biyyaa bulchuuf uummata keessatti bakka hundaa’een aangoo isaa biqile jiraachuun barbaachisaa dha. Gargaarsa irratti bu’ureefamee ala lubbuu dheerachuu hin danda’u. TPLF waggaa dheeraa kana uummata Impaayeera Itoophiyaa kan cabsitee bulchuu dandeese gargaarsaa fi hundee jabaataa Uummata Tigrayi biraa waan qabduuf. Yaroo rakkinni itti dhufe illee gara hundeen ishee jiru itti baqatee akka of jajjabeessaa jirtu ifa jira.
Waggaa 27 darban OPDOn tuhannaa TPLF jalatti ergamuuf walitti gurmeefamte malee sagantaa akeekaa fi kaayyoo qabu irratti ijaaraatee hin turre. Of ijaaruufis qophii hin qabdu. Utuu of ijaaruuf kan tattaafatu tahee illee TPLF itti hin dhiiftu. Kanaafuu utuu dhuma TPLF jala deemanii ilmaan Oromoo samaa fi saamsisaa, hidhaa fi hiisisaa, ajjeesaa fi ajjeesisaa barri dheeraan kun darbe. Uummatni Oromoo xiqqaa fi guddaan harka wal qabatee dhiiga isaa lolaasee TPLF yaroo of irraa darbu, jijjirama kana ni ciisifna jedhanii warri OPDO aangoo fudhatan. Badii darbeef walii gala uummatni Itoopiyaa dhiifama nuuf godhee jira jedhee kan labsate OPDO dha. Sagaleen uummata garuu hin dhaga’amne. Erga jedhanii haa tahu jenne yaada isaan qaruu fi gara daandii qajeelaa isaan geessu namni beekaa tahee yaada hin hirre hin jiru. Warri OPDO garuu murteefatanii farra uummataa tahuu filatan. Keessatuu farra Uummata Oromoo tahanii argamuun waan baayye nama ajaa’ibuu fi nama gadisiisuu dha.
Karaa koof utuu Uummata Oromoon ammatamanii qileensa miti bubbeen hamaanuu akka aangoo irraa isaan raasuu hin daneenye yaada dhiyeesaan ture. Isaan garuu gorsa diyaaqonootaa fi nafxanyootaa dhaga’uu filatan. Ilmaan Oromoo hidhuun, adamsuun, ajjeesuu fi saamuun gocha Wayyaanee ol tahee argame. Uummata Oromoo qe’ee isaa irraa kumaatan buqqisuun hojii diinumaa guddaa tahee jira. Komandi postii gara Oromiyaa deebisanii fiduudhaan Uummatni Oromoo RIBn akka dhidhitamu godhan. Kan takkaa dhaga’amee fi argamee hin beekne xiyyaaraa fi summii kemikaalan biyyaa Oromiyaa fi Uummata Oromoo gubuu filatani.
Uummta Oromoo gananii olaantummaa Amhaaraa faarsuun faashitummaa Impaayeera Itoopiyaa diiguu sababa tahe akka fidaa jiran kunoo ijaan argaa jiru. Ijaarsonni Habashaa fi Nafxanyootaa kan isaan faarsaa jiran of ijaaranii aangoo irraa butachuuf malee jaalala isaanii dhugaan qabaatanii miti. Kana malee akka isaan ABO fi WBO cabsuun akka isaaniif hojjetani gochuuf. Kan ofii isaanii aangoo irratti wal fixan caalaa warri kaleesa Kononeel Abiyiin “Nabiyuu dha” jechaa turan har’a “Lucifer” jechaa jiru. Jaalalli isaanii amuma kana.
Hojiin Mumicha Ministeera namaa baayyeef gala hin jiru. Gaafa muudamu akeeka Miniliki bakkaan gahuuf hawwiin qaba jechuun maaliif barbaachisaa tahe? Miniliki saboota Impaayeera Itoophiyaa hedduu garba godhee gurguraa ture. Nama Oromoota irraa harkaa fi harma cire. Nama Eritrea illee meeshaaf jechaa gurgurate. Saba Amhaara qofa gammachiisuuf waan godhe fakkaata. Bu’aa irraa argate isa duwwaatu beeka. Gaafufa sana haadhaa fi haadha mana isaa faarsee akka maqaa abbaa isaa hin kaasiin darbe ni yaadatama. Dhiyeenya kana gaafa abbaan isaa boqotan dhaqee taa’ee nama ilaala. Boo’uu miti nama gadda qabu hin fakkaatu. Baayyee waan rakkina namaaf gadduuf mana dubartotaa rakkatanii deemee ni boo’aa jedhama. Nuyis gaafa Jeneraal Saareen du’e akka gadduu fi boo’uu danda’u agarre. Garuu ni fakkeessa haa tahuu fi dhugaa tahuu isaa waaqa duwwatu beeka. Namni du’a abbaa isaa hin gaddine ormaaf ni gadda jechuun namatti olfaata. Yoo akkuma jedhani jaarsichi abbaa foonii isaa(biological father) akka hin taane yoo kan beeku tahe malee.
Uummatni Oromoo uummata dhiifama namaa godhuu fi nagaa jaalatu waan taheef amma illee OPDOn balleessaa darbe irraa barattee dhugaan uummata Oromoo wajjin dhaabbachuu yoo feete dhiifama godheefii akka wajjin dhaabbatu mamii hin qabu.
Karaa OPDO hatattamaan waan godhamuu qabuu :
Ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran hiikuu
Ilmaan Ormoo admamsuu fi ajjeessuu dhaabuu
Komandi Postii Oromiyaa keessa jiru buqisuu fi waraana dhaabuu
RIB Oromiyaa keessaa buqa’ee akka kaampii isaa galu gochuu
Ijaarsota Oromoo wajjin walii galtee dhugaa gochuu ABO fi KFO dabalatee
Araara dhugaa gochuun WBO akka qaama Poolisaa fi Humna Darbataa Oromiyaa tahu gochuu.
Walii gala rakkinni Oromoota jidduu jiru humnaan hiikuuf yaaluun dhaabbachuu qaba.
Honkora olaatumaan Amhaaraa Impaayeera sana keessata uumaa jiruun OPDOn waan armaan olii yoo yaroo gabaabaa keessatti hin raawwanne akkuma fixeensa ganamaa sana tasa akka baddu mamii hin qabu. Haala amma jiru kanaan OPDOf bubbee hin barbaachisu. Humna qileensaa iyyuu darbamuu ni danda’a.
Gadaan Gadaa Bilisummaa ti
OPDOn Weerara Ijibbaataa fi isa Dhumaa Oromoo fi WBO irratti Deemsaa jirti
OPDOn Weerara Ijibbaataa fi isa Dhumaa Oromoo fi WBO irratti Deemsaa jirti Caamsaa 24/2019 - Via Waliif Birmanna…
OPDOn waadaa uummata Oromoo nyaattee jirti
OPDOn waadaa uummata Oromoo nyaattee jirti Taakkalaa Uumaa dhimma kondimineemii lafa Oromoo irratti ijaarrame dabarsanii…
OPDOn Subboonummaa Oromoo Ajjeessuu fi Ajeessuuf Wixxifachaa Jirti!
OPDOn Subboonummaa Oromoo Ajjeessuu fi Ajeessuuf ixxifachaa Jirti! Damee Boruu tiin, Caamsaa 4, 2019 Qondaallonni…
Qabsoon Bilisummaa Oromoo eessaa ka’ee garamitti deemaa jira? – MARSAA LAMMAFFAA – Lakkoofsa Torbaffaa
Africa’s current pharmaceutical status not sustainable, says Ali Mufuruki